‘Isinyamalele’ inhlangano yamaphasela okudla | News24
‘Isinyamalele’ inhlangano yamaphasela okudla
UMPHAKATHI wakwadi 8 ngaphansi kwekhansela uMnu Bethwell Ngcobo uthi ukhathazekile ngoBuntu Trust okuyinhlangano abathi yabakhokhisa imali engango R20 ukuze bakwazi ukuthola amaphasela okudla kulo nyaka ngenyanga kaMasingana.
Kumanje le nhlangano ayibonwa nangokhalo ukubuyela emphakathini ilethe amaphasela okudla njengoba yabe ithembisile.
I-Echo yalushicilela lolu daba emva kokuba kube nezinsolo zokuthi abantu babebhaliselwa ubulunga benhlangano ebusayo i-ANC. UNgcobo wazichitha lezi zinsolo wathi ukubhaliswa kwabantu kwakungahlangene nakancane nobulungu be-ANC.
Ekhuluma ne-Echo mayelana nokuhamba ijubalale Ubuntu Trust uthe naye uze wasukuma wayocela ukuba alulekwe iziphathimandla zamaphoyisa ngoba ebona ukuthi le nhlangano ayiveli njengoba yayithembisile.
Uqhube wathi ululekwe ngokuthi kumele avule icala avulele Ubuntu Trust ngenxa yokuthi nabantu bayakhalaza ngokuthi kunezinto zabo ezibalulekile ezinjengama khophi omazisi ezahamba nale nhlangano.
“Bengilokhu ngizame njalo ukuxhumana nabo ngibathinte ngocingo kodwa bengaphenduli noma bengatholakali. Kuthe nje emva kokuthi ngibonane namaphoyisa emva kwamasonto ngathola umqhafazo ovela kubona bengitshela ukuthi ababalekile kodwa abekho kuleli zwe basezweni lase Ethiopia. UNksz Thokozile Ngcobo okunguye ebengixhumana naye uthe bazohlela usuku abazofika ngalo Futhi nalokho wathi bazongazisa. Ngisalinde bona njengamanje ukuthi bangazise ukuthi ngabe kuqhubekani,” kusho ikhansela.
Ebuzwa uNgcobo ukuthi ngabe mingaki imindeni ethintekayo neyabhalisela lolu hlelo lokwabelwa ukudla uthe iyonke imindeni ingu 1 492.
“Lesi sibalo sihlanganisa nabantu abakhubazekile. Bonke bakhokha le mali engango R20. Okunye abase bekuhlelile ukuthi esikhundleni sokuthi abantu banikezwe ukudla kungagcono bathole ama voucher ukuze bazokwazi ukuthi baye ngawo ezitolo bayothenga ukudla. Lokho ke bekungakenzeki okwamanje njengoba sisabalindile nje,” liqhuba ikhansela.
Oyilungu lomphakathi ongathandanga ukudalulwa uthe okubi kakhulu ukuthi kunomazisi babantu abathathwa yile hlangano bahamba nayo.
“Lokho kukodwa kudala ukuthi kube nokwesaba ukuthi ngabe izinombolo zomazisi zabantu ziphephile yini,” kusho isakhamuzi.
Ayitholakalanga le nhlangono kuphawula